FANAFIHANA MITAM-BASY TETO MAHAJANGA : Olona fito voasambotry ny mpitandro filaminana
Olona miisa 7 aloha no efa voasambotry ny mpitandro filaminana hatramin’ny sabotsy teo. 3 lahy sy 4 vavy ary iray hafa lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana. 12 février 2019
Ireo olon-dratsy tratra ireo no anisany tompon’antoka tamin’ny fanafihana mitam-piadiana nifanesy nandalo teto Mahajanga ny herinandro lasa teo. Ny sasany kosa mpampiantrano, ny hafa nanome fitaovana hampiasain’ireo jiolahy, toy ny moto. Anisany notafihin’izy ireo ny tokantranon’ny mpandraharaha tao Ambalavola sy ny “bijouterie Krish” izay nahafatesana raim-pianakaviana karana iray ny alarobia 6 febroary teo.
Mbola izy ireo ihany koa no nanao ny fanafihana mpivarotra volamena iray tao Manjarisoa sy iray hafa tao Morafeno ny sabotsy 9 febroary teo. Anisan’ireo tratra i Eddy tokamaso, izay anisany nanafika ny tranombarotra Miracle tao Ambalavola ka nahafatesana tovolahy iray izay voatifitra teo amin’ny masony ny volana aogositra 2018. Vola 600 000 ariary no nandatsahany aina tamin’izany. Efa tratra ny namany iray ary efa migadra, araka ny nambaran’ny polisy. Mbola izy ireo koa no nanafika ilay kioska teny amin’ny bois sacré ka namono mpiambina iray. Ny iray tamin’ireo jiolahy dia maty notifirin’ny mpitandro filaminana rehefa nikasa ny handositra.
Araka ny fanazavan’ny kaomisera lehiben’ny mpanao famotorana dia namaly ireo polisy izy ka naka ny basy teny amin’ny polisy iray, tamin’izy voatazona tao amin’ny “violon” ka saika handositra. Ity maty ity no tena mpanambana basy sy mpampihorohoro ireo lasibatra. Misy amin’izy ireo efa nigadra tany Marovoay ka ny 16 janoary teo no vita ny saziny dia izy miverina manao asa ratsy izao sahady. Misy tamin’izy ireo koa efa mpamerin-keloka. Misy naman’izy ireo roa hafa, ireo hita tamin’ny sarin’ny “caméra de surveillance”, izay tena atidoha mpikotrika mbola karohina hatramin’izao.
Fantatra fa manana basy izy roalahy ireo. Nangataka ny hanaovan’ny fokontany peta-drindrina ny laharana findain’izy ireo ny mpitandro filaminana mba hahafahan’ny mponina miantso azy ireo haingana raha misy tranga. Manao antso avo ireo avy eo anivon’ny polisim-pirenena amin’ny fanomezam-baovao avy amintsika tsirairay avy hanamora ny famongorana ireo mpanao ratsy eto an-tanàna. Raha misy ny tranga mampiahiahy dia azon’ny rehetra atao ny miantso ny Emmo Sécurité Mahajanga amin’ireto laharana ireto : 034 09 553 72 / 032 98 888 57